Cawil Cadami Burhaan - Wikipedia
Cawil Cadami Burhaan
Fiiro gaar ah: Qoraalka halkan ku jira ma ahan mid sax ah oo lagu kalsoonaan karo
Cawil Cadami Burhaan: waxa uu aha afduubihi 24.November.1984-kii, maalin sabti ah, ayey diyaaraddii Somali Airlina, ee nooceedu ahaa, Boeing 707-338C, Flight Number-keeduna ahaa 415, duuliyena uu ka ahaa Duuliye Maxamuud Xaaji Cilmi (Xaaji Dhagax), ayaa waxay ka kacday, garoonka diyaaraddaha ee magaaladda Muqdisho, iyadoo usii jeeda magaalada Jiddah ee Sucuudi Careebiya, lakiin ku sii hakan lahayd magaaladda Berbera. Wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa 1958-kii.
1967-74-kii waxbarashadiisa dugsiga H/dhexe wuxuu ku qaatay magaalada Hargeysa. 1974-78-kii waxbarashadiisa dugsiga sare wuxuu ku dhamaystirtay dugsigii Agoomaha Lafoole ee Muqdisho. 1978-79-kii sanadka wuxuu galay layli sarkaal ee kuuliyada ciidamada ee Muqdisho.
1979-83-dii wuxuu xilal kala duwan ka qabtay ciidankii Asluubta qaybtii Hargeysa isaga oo taliye ku-xigeen ka ahaa xabsiga Hargeysa iyo taliyaha xarunta Agoomaha ee Hargeysa, halkaasoo markii dambe lagu xukumay inuu gobolka ka baxo, sidii saraakil fara badan gobolkan looga saaray oo loo diray magaalada Muqdisho, iyadoo uu xabsiga Afgooye taliye ka noqday.
25/11/1984-kii wuxuu hogaaminayay hawl-galkii lagu afduubay diyaaradii ka degtay dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa, halkaasoo ku codsadeen in la sii daayo dhalinyaro dil ku xukunayd oo ku jiray xabsiga Mandheera iyo siyaasiyiin kale oo ku xidhnaa xabsiyada Koonfureed. Dhalinyaradii ku xukunayd dilka waxaa loogu bedalay xabsi daa’in oo waxay ahaayeen todoba oo mid baa la dilay. 1984-91-kii wuxuu ka mid ahaa ururkii SNM ee halganka ugu jiray xorayntii dalka. 1991-94-kii wuxuu xil ka hayay ciidanka Asluubta, 1994-kii bishii November wuxuu ku geeriyooday fal-xun oo ay koox Argagixiso ahi ka fuliyeen goor habeenimo ah magaalada Hargeysa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cawil_Cadami_Burhaan&oldid=171640"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 11:14, 3 Oktoobar 2017.